ရွာထိပ်တွင်လော်ကြီးဖြင့်အော်နေသော အဘဖော၏အငြင်းပွဲတွင်မပါဝင်ဖြစ်သော ကျွန်မရဲ့ဝါဒ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ရွာထိပ်တွင်လော်ကြီးဖြင့်အော်နေသော အဘဖော၏အငြင်းပွဲတွင်မပါဝင်ဖြစ်သော ကျွန်မရဲ့ဝါဒ
ရွာထိပ်တွင်လော်ကြီးဖြင့်အော်နေသော အဘဖော၏အငြင်းပွဲတွင်မပါဝင်ဖြစ်သော ကျွန်မရဲ့ဝါဒ
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Nov 15, 2012 in Community & Society, Opinions & Discussion | 45 comments
:chee: ရွာထိပ်တွင်လော်ကြီးဖြင့်အော်နေသောအဘဖော၏အငြင်းပွဲတွင်မပါဝင်ဖြစ်သော ကျွန်မရဲ့ဝါဒ :chee:
ကျွန်မရဲ့ရသစာပေတစ်ပုဒ်ကို အစမရရအောင်ဆွဲထုတ်ပြီးငြင်းခုံပွဲကြီးတစ်ရပ်ကျင်းပနေတဲ့အဘဖောထံကျွန်မ ၀င်မမန့်ဖြစ်သေးပါ။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အစကတော့ကျွန်မတို့ကျောင်းမှာကထိန်အတွက်တော်တော်လေးအလုပ်ရှုပ် နေပါသောကြောင့်။
သို့သော် ကျွန်မ၀င်အငြင်းပွားစရာမလိုသည့်အတွက်ကြောင့် ၀င်မမန့်ဖြစ်ပါ။
ကျွန်မကအဘဖောကိုလေးစားသူအနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်လို့ စိတ်ဝယ်မခံစားမိသလိုအဘဖောက တစ်ယူသန်ကြီးဟုလည်းမမြင်ပါ။
အဘဖောက ကျွန်မပို့စ်မှာအတင်းဝင်ငြင်းပေမယ့် ကျွန်မကအဘပို့စ်မှာဝင်မငြင်းခြင်းဟာ အဘကိုအမြင်စောင်း၍မဟုတ်ပါ။
အဘရဲ့ကြီးပွားကြောင်းစာစုတွေဟာ ချမ်းသာချင်တဲ့သူတွေတကယ်လိုက်နာရင် တကယ့်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။
သို့သော် ကျွန်မရဲ့ခံယူချက်ကကျတော့ တစ်မျိုးဖြစ်နေတာနဲ့ ကျွန်မ၀တ္ထုတိုနဲ့စတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကြီးမှာ ကျွန်မကငြင်းတဲ့ဘက်ကမပါဝင်ခြင်းပါ။
မနေ့ညကရွာထဲဝင်မိပေမယ့် သူများတွေမန့်ထားတာပဲဝင်ဖတ်ရင်း ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ်သာအပြေးအလွှားတင်သွားနိုင်ပါ တယ်။
ကျွန်မသည်ငယ်စဉ်ကအတည်းက ကိုယ့်ထက်နိမ့်ကျတဲ့သူငယ်ချင်းများကိုပေးကမ်းကျွေးမွေးရတာဝါသနာထုံ သည်။
သူတို့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲလဲဆိုတာကျွန်မအတွက်မလိုအပ်။ကျွန်မအတွက်ကတော့ မရှိဆင်းရဲသားတစ်ယောက ကိုပေးကမ်းချင်တဲ့ပရဟိတအငယ်စားလေးတွေအမြဲလိုလိုကိန်းအောင်းနေတတ်သည်။
ကျွန်မသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမို့အမွှန်းတင်သည်မဟုတ်။ကျွန်မရှေ့မှာသူများမကောင်းကြောင်းအတင်းအဖျင်းများ လာပြောလျှင်မကြိုက်တတ်။ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း သူများမကောင်းကြောင်းပြောရမှာအလွန်ဝန်လေးတတ် သည်။ကျွန်မရှေ့မှာ မကောင်းတာလုပ်စားနေတဲ့ကောင်မလေးအကြောင်း လာပြောလျှင်တောင် ကျွန်မပြန်လည် အပြစ်တင်အတင်းစကားမဆိုဝံ့။
သူနားလည်မှုလွဲနေတာပါ။သူထင်နေတဲ့အလုပ်က အလုပ်အကိုင်စားဝတ်နေရေးတစ်ခုတည်းကို ကိုယူဆပြီးပြောသွားတာ။
“ကံမရှိဥာဏ်ရှိတိုင်းမွဲ” ဆိုတာကြောင့် အတိတ်ဘ၀က ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမှမရှိရင် ဘယ်အလုပ်ကို ဘယ်လောက်ဥာဏ်အားစိတ်ထုတ်လုပ်လုပ် မကြီးပွားနိုင်ပါဘူး။
ယခုဘ၀မှာ ကြီးပွားချမ်းသာနေကြတဲ့လူတွေဟာ ရှေးဘ၀ကအတိတ်ကံကြောင့်ဆိုတာကို ကျွန်မအကြွင်းမဲ့ လက်ခံတယ်။
ဒီဘ၀မှာကြီးပွားနေပေမယ့် နောက်ဘ၀မှကြီးပွားဖို့ဆိုတာကိုယ်ပြုတဲ့ ကုသိုလ်၊အကုသိုလ်အပေါ်ပဲမူတည်တယ်။
ကျွန်မက ဘုရားတရားကိုလေ့လာလိုက်စားလွန်းလို့ အခုလိုတွေရေးပြနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကျွန်မသည် ဘုရား၊ကျောင်း၊ကန်၊စေတီ၊ပုထိုးများသို့ ငါးရာ၊တစ်ထောင်လှူဖို့စိတ်ပါချင်မှပါမည်။
အကျိုးပေးနည်းပြီး ကိုယ့်ထက်နိမ့်ကျသူတွေကိုကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ကူညီချင်စိတ်အလိုလို ပေါ်မိသည်။
တစ်မနက် ကျွန်မအိပ်ရာကနုိးလို့အိမ်ရှေ့ထွက်မိတော့ ကျောင်းရှေ့ကရေအိုင်ထဲမှာကန်စွန်းရွက်ခူးနေတဲ့ ၂တန်းကျောင်းသားလေးကိုတွေ့ရသည်။
သူ့အိမ်စီးပွားအတွက်သူလုပ်နေတာပါ။ဒါပေမယ့် ကျွန်မရေထဲကတက်ခိုင်းပြီး ကန်စွန်းရွက်ဖိုးပေးလိုက်သည်။
(အထက်ပါစာစုကိုဖတ်မိသည့် အဘဖောကဲ့သို့ကြီးပွားရေးဝါဒီတို့က ကောက်ချက်ချမည်ဧကန်။
(၁)ကောင်လေး ရေထဲဆင်းနေသဖြင့်ဖျားနာမည်ကိုစိုးရိမ်သည့် ဂရုဏာ။
(၂)ကောင်လေးနေမကောင်းလျှင် ဆေးကုဖို့ပိုက်ဆံမရှ၊လူနာစားဖို့ဘာဘာညာဘာဝယ်စရာမရှိတဲ့သူ့မိဘ အတွက်တွေးမိတာက ကိုယ်ချင်းစာတရား။
(၃)ကောင်လေးနေမကောင်းပြီးကျောင်းပျက်၊စာတွေနောက်ကျ၊စာမလိုက်နိုင် ဖြစ်မှာကိုတွေးပူမိတာက စေတနာ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ၀ါဆိုသင်္ကန်း၊ကထိန်သင်္ကန်းတို့ကို ကျွန်မအမျိုးသားရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်မှုကြောင့် နှစ်တိုင်းကပ်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်မစိတ်က ကပ်ချင်လိုစိတ်၊လှူချင်လိုစိတ်မပြင်းပြပါ။
သို့သော် ကံကံ၏အကျိုးကိုအလွန်ယုံကြည်သည့်အတွက် ချမ်းသာခြင်းကိုပြင်းစွာမလိုချင်။
သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနေထိုင်ပြီး စိတ်မပင်ပမ်းခြင်းကသာ အကုသိုလ်နည်းနိုင်သမျှနည်းစေသည် ဟုခံယူပါသေးသည်။
ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်မရဲ့ဝါဒီက ဆင်းရဲသားတွေဆင်းရဲမှု၊လူချမ်းသာတွေချမ်းသာမှုဟာ ကုသိုလ်၊အကုသိုလ် ကံအကျိုးပေးနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်မခံယူချက်သည် ဆင်းရဲသားများကိုကော၊လူချမ်းသာများအပေါ်တွင်ပါ-
အထင်သေးခြင်း၊အထင်ကြီးခြင်း စိတ်ခံစားလေ့မရှိ။ထို့ကြောင့် ငြင်းဆိုလိုစိတ်မရှိ။
လူတိုင်း လက်တွေ့ပြုမူ၊နေထိုင်၊ကျင့်သုံးခြင်းသည်သာ အနာဂတ်အတွက် ရလာဒ်ဟုခံယူပါသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ မျက်နှာအလှခွဲစိတ်ပြုပြင်သည့်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ သေခါနီးအတွေ့အကြုံ
ဆိုတဲ့ဘာသာပြန်လေးကိုဖတ်ပြီး အလွန်မှသံဝေဂရမိပါကြောင်း ထုတ်ဖော်ရေးသားဆွေးနွေးလိုက်ရပါသည်။
(မည်သူမဆို မိမိတို့ခံယူချက်ကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်)
ဒီမိုးကွမ်းစားထွေးပစ် လမ်းစဉ် ၊ အယူဝါဒ များ
၁ – မြန်မာနိုင်ငံသည် လုံးဝ မကောင်းသော နိုင်ငံဖြစ်သည်
၂ – မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သော သူများသည် ကမ်ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို နေသော မြန်မာနိုင်ငံကထွက်သွားသူများထက် နိမ့်သည် ၊ ဆင်းရဲသည် ၊ အောက်တန်းကျတယ်လို့ မပြောတာ ကျေးဇူးတင်ရမလိုပါပဲ ။
*** အိုဗျာ… အချက်အလက်တွေ သိပ်များရင် လိုရင်းမရောက်ပဲနေလိမ့်မယ်
ရတဲ့အခွင့်အရေးမယူပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာပေကပ်နေသူအားလုံး ဖွတ်ပဲ
အဲဒါ လမ်းစဉ် အယူဝါဒတွေ ဆိုပါတော့ ၊ ဆိုတော့ အဲဒါလေးတွေ နားလည်ထားရင် … နန်းတော်ရာသူ ဖြေသိမ့်လို့ ရမယ် ထင်ပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံသား ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူ
ဖအေ ဗမာ ၊ မအေ မွန်+ဗမာ+ရှမ်း
အလုပ်ကောင်းမှကံကောင်းသည် ။ ကံကောင်းမှကောင်းကျိုးရသည် ။
အလုပ်ဆိုးလျှင် ကံဆိုးသည် ။ ကံဆိုးတော့ ဆိုးကျိုးရသည် ။
ကိုယ် နှုတ် စိတ်တို့ ဖြင့်ပြုလုပ်သော်လဲ ပြုလုပ်တိုင်း ကံမဖြစ်ပေ ၊ ကံအရာမမြောက်ပေ ။
အကောင်းအဆိုး ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုခုဖြင့် တက်ကြွထက်သန်သောစိတ်
ဦးဆောင်လျက် ပြုလုပ်မှသာ ကံအရာမြောက်၍ ကံဟုခေါ်သည် ။။။
မကောင်းမှုရှောင် ၊ ကောင်းမှုဆောင် ၊ ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား ။
ပြောပြုတွေးလျှင် ၊ သတိယှဉ် ၊ ဆင်ခြင်ဥာဏ် ရှေ့သွား။
စိတ်ထားဖြောင့်မှန် ခွင့်လွတ်ရန် ၊ သည်းခံမေတ္တာထား ။
လုံ့ လနှင့်ဇွဲ ၊ မလျှော့ဘဲ ၊ အမြဲတင်းတင်းထား ။
အရာရာတွင် ၊ အသုံးဝင် ၊ အောင်မြင်ကြောင်းတရား ။။။။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်မတို့အစိုးရ၀န်ထမ်းဆိုတာဟာလည်း ဆင်းရဲသားနဲ့ဘာများကွာခြား နေလို့လဲ မဟုတ်ဘူးလားရှင်။
yes ၊ အမှန်ပါ တစ်နေတာ ကန်စွန်းရွက်ဖိုးပေးရုံဖြင့်
တစ်မျိုးသားလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကြံဆောင်ပေးကြပါ။
ငြင်းခုံနေရုံဖြင့် မတိုးတက်နိုင်ပါ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေချင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေက ချမ်းသာတဲ့သူတွေကို ခရိုနီ ဆိုပြီး စွဲချက်တင်တာ ခေတ်စားနေတယ်။ နိုင်ငံခြား investment တွေကိုခေါ်နေတာတွေကလည်း ခရိုနီတွေကိုခေါ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလား ။
ဆင်းရဲတဲ့သူတွေက ချမ်းသာတဲ့သူတွေကို ခရိုနီ ဆိုပြီး စွဲချက်တင်တာ ခေတ်စားနေတယ် ဆိုတာတော့ ဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ဗျ.. ဦးနေးချားရ
ပိတ်လှောင်ချုပ်တင်းငြိမ်ဝပ်ပိပြားနေအောင် လုပ်ထားတဲ့ ခေတ်အမှောင်ကြီးမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အုပ်ချုပ်သူအာဏာရှင်များကို ထိပ်ပေါ်တင် ဖင်လျက်ပြီး မတော်ကြီးပွားချမ်းသာသွားတဲ့ ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေကိုမှ ခရိုနီလို့ ခေါ်တာပါခင်ဗျ..
ဘဖောပို့စ်မှာကျနော်ပြောထားတဲ့ ကံ၊ ညဏ်၊ ၀ီရိယ အပြင် ဂွင်ရယ် လမ်းကြောင်းရယ် အကပ်ကောင်းမှုရယ်ကြောင့် အခွင့်ထူးခံ လောပန် ဖြစ်လာတဲ့ သူများသာ ခရိုနီဖြစ်ပါကြောင်း
ညနေခင်းရွာထဲဝင်လျှောက်ကာလည်မလို့ စိတ်ကူးနဲ့ရွာဝင်တော့ ရွာထိပ်ရောက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ
နန်းတော်ဝင်သူက အဘဖော၏အငြင်းပွဲတွင်မပါဝင်ဖြစ်သော ကျွန်မရဲ့ဝါဒ ဆိုပြီးလက်ကမ်းကြော်ငြာလေး
ကမ်းလာတာနဲ့ မျက်မှန်မပါလာလို့ ဇနပုတ်တဲလေးဆီအပြေးလာပြီး မျက်မှန်တပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာ။
” ကျွန်မစိတ်က ပေးချင်၊ ကမ်းချင်စိတ်များသာ ပြင်းပြလေ့ ရှိတတ်ပါတယ် ”
နန်းတော်ရာသူရဲ့ ဆင်းရဲသားတွေကို ပေးကမ်းလိုစိတ်ရှိခြင်းကို
အဘ ဘာမှကန့်ကွက်စရာ မရှိပါဘူးကွယ် ။
အဘ ကိုယ်တိုင်လည်း ဆင်းရဲသားတွေ ကို ၊ ကူညီ ပေးကမ်း လေ့ရှိပါတယ် ။
တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကဆိုရင် ၊ အဘ ဆီ လာတောင်းသမျှ လူတွေအားလုံးကို ၊
လက်ချည်းဗလာနှင့် မပြန်စေရဘူး ဆိုတဲ့ ၊ စိတ်ထား ကျင့်သုံးခဲ့ဘူးပါတယ် ။
( စကားမစပ် ၊ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဆင်းရဲသား Poor ဆိုတဲ့ စကားလုံးအစား
Less Fortunate ကုသိုလ်ကံ သိပ်မကောင်းရှာသူများ လို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး သုံးလာကြပြီ )
သို့ပေမယ့် ၊ အောက်က စကားစုလေးမှာတော့ ၊ တစ်ခုထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ်ကွယ် ။
” အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ အလုပ်ရဲ့ကံအကျိုးကို ပစ္စုပ္ပန်မှာရနေတယ် ။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ ပြုတဲ့အလုပ်ရဲ့ ကံအကျိုးကို အနာဂတ်မှာ ခံစားရမယ် ”
ပစ္စုပ္ပန်မှာ ပြုတဲ့အလုပ်ရဲ့ ကံအကျိုးကို ပစ္စုပ္ပန်မှာ လည်း ခံစားရပါတယ်ကွယ် ။
အဘ ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ Post ကလည်း ၊
ပစ္စုပ္ပန်မှာ ပြုတဲ့အလုပ်ရဲ့ ကံအကျိုးကို ပစ္စုပ္ပန်မှာတင် ခံစားရစေချင် လွန်လွန်းလို့ ၊
အိပ်ပျော်နေသူများကို တွန်းအားပေးတဲ့ Post ပါကွယ် ။
ဟုတ်တယ်လေ ၊ အရင်ဘဝက လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ၊
မမြင်နိုင် သို့မဟုတ် မပြင်နိုင်တဲ့ အတိတ်ကံကိုပဲ ထိုးချ / ပုံချ မနေပဲ ။
လက်ရှိလုပ်ပြီး လက်ရှိ အကျိုးပေးနေတဲ့ ၊
လက်ရှိလည်း ကိုယ်လုပ် / ကိုယ်ပြင် နိုင်တဲ့ ၊ ပစ္စုပ္ပန်ကံ ကိုပဲ ၊
မ နန်းတော်ရာသူ နှင့် မဆက်စပ်ပါဘူး လို့ Post ထဲမှာလဲ ရေးထားပေးပါတယ်ကွယ် ။
စဉ်းစားမိတဲ့ အစလေးတစ်ခုကြောင့် ရွာသူားတွေနှင့် Brain Storming လုပ်နေကြတာပါ ။
” အမှန်တော့ ဟိုဘက် Post က ၊ စာရေးသူက သူ့ဘာသာသူ ၊ ရသ စာပေလေး ရေးထားတာပါ ။
ဖတ်လို့လဲ တော်တော်ကောင်းပါတယ် ။ အပြစ်ပြောစရာလဲ ဘာမှ မရှိပါဘူး ။
အခု Post ကလည်း သူ နှင့် မဆိုင်ပါဘူးကွယ် ။
အဘ မှာသာ စပ်ဆော့ပြီး ၊ အစလေးတစ်ခုကို ဖြန့်တွေးကြည့်မိနေတာပါ ။ ”
နန်းတော်ရာသူ ရဲ့ ရသ စာပေ အရေးအသားလေးများကို ကြိုက်ပါတယ်ကွယ် ။
အဘ Post က ၊ မ နန်းတော်ရာသူ နှင့် Personally သော်၎င်း ၊
မ နန်းတော်ရာသူ ရဲ့ အရင် Post ကို ဆက်ခေါ် ပြီးငြင်းတာ သော်၎င်း ၊
မဟုတ်ရပါကွယ် ။ သိပ် စိတ်ထဲမှာ မထားပါနှင့် ကွယ် ။
ရွာထဲမှာ ပျော်ရွင်စွာဖြင့် ၊ စာတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေကွယ် ။
အဘရေ ကျွန်မပြောတဲ့ အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပန်၊အနာဂတ်ဆိုတာ ဘ၀တွေခွဲပြီးဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ။
လက်ရှိဘ၀မှာတင် ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုး၊မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုး ကိုဆိုလိုပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်မှာလုပ်တဲ့အကျိုး ပစ္စုန်ပ္ပန်မှာခံစားရတယ်ဆိုတာ အဘအထင်နည်းနည်းလွဲနေသလားလို့။
အမှန်က အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်ပါ။
အဘက ကြီးပွားတဲ့သူတွေကိုချည်း ကြိုးစားခဲ့တာလို့မြင်နေလို့ပါ။
တကယ့်တကယ်တော့ အဘက ကြီးပွားနေတဲ့လူတွေရဲ့ဟာကွကတွေကိုတော့ ကြီးပွားနေပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ထည့်စဉ်းစားတော့ပုံမပေါ်ဘူး။
(ကျွန်မအယူအဆပါ အဘကဖြင့်ကြိုက်သလိုယူဆလို့ရပါတယ် ဘယ်သူမှမမှားဘူးလို့ထင်ပါတယ်။)
” ပစ္စုပ္ပန်မှာလုပ်တဲ့အကျိုး ပစ္စုန်ပ္ပန်မှာခံစားရတယ်ဆိုတာ
အဘအထင် နည်းနည်းလွဲနေသလားလို့ ”
အဲဒါတော့ ၊ မလွဲပါဘူး ကွယ် ၊ ဘုရားဟောမှာ ပါပါတယ် ။
ပစ္စုပ္ပန်မှာလုပ်တဲ့ အလုပ်ရဲ့ ကုသိုလ် အတိုင်းအဆက နည်းနေလို့ အကျိုးပေးတွေ မသိသာတာပါ ။
ဥပမာ ။ ။ ဈာန်သမာပတ်က ထလာတဲ့ ရဟန္တာ ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ၊ ဘုရားရှင်ကို ၊
ယုံယုံကြည်ကြည် နှင့် ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး ၊ ဆုတောင်းရင် ချက်ချင်း ပြည့်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ၊ အဘက တရားစခန်း ဖြုတ်တဲ့အချိန်တွေကိုမှ ရွေးပြီး ဆွမ်း လှူလေ့ ရှိပါတယ် ။
ကုသိုလ် ရဲ့ အကျိုးပေးကံ ၇ ကံ ရှိပါတယ် ( ထင်ပါတယ် ) ။
အဲဒီထဲက ၂ ကံ ( ထင်ပါတယ် ) က ဒီ ဘဝမှာတင် အကျိုးပေးရပါတယ် ။
အဲဒီ ၂ ကံ က ဒီဘဝ မှာ အကျိုးမပေး နိုင်ခဲ့ရင် ၊ နောက် ဘဝကို ပါမလာတော့ပဲ ၊
အဲဒီ ကုသိုလ်ဟာ အလဟဿ ဖြစ်သွားပါတယ် ၊ အဟောသိကံ ဖြစ်တာလို့ ခေါ်ပါတယ် ။
အဘိဓမ္မာထဲက သေခါနီး ဇော ၇ တန် ပေါ်တဲ့အခန်းမှာ သေချာ ရှင်းပြထားပါတယ် ။
အင်း ၊ ပညာများ မပြည့်ဝတော့လည်း စာပိုဒ် တစ်ခုလုံး ( ထင်ပါတယ် ) ချည်းပဲ ။ ဟီ ဟိ ။
အဘ ၊ အရင်က အဘိဓမ္မာ သင်တန်း တက်တုန်းကတော့ မှတ်မိပါတယ် ၊
အခုတော့ ၊ ဟီ ဟိ ၊ အေ ကေ ဘီ ဖိုးတီအိတ် လောက်ပဲ ခေါင်းထဲ ရှိတော့တယ် ။
အဘိဓမ္မာ ဆိုလား ၊ ဝိသုဒ္ဒိမဂ် ဆိုလား ဖြေဖို့လုပ်နေတဲ့ ရွာသူကြီးရေ ကူညီပါအုန်းဗျ ။
အဘရေ ကျွန်ပြောပြပြီးပြီကော ကျွန်မပြောတဲ့ အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပန်၊အနာဂတ်ဆိုတာ
ကျုပ်က အဲဒီပိုစ့်မှာ သူ့ကိုခံငြင်းမလို့ အဖေါ်စောင့်နေတာ …. :harr:
အတည်ပြောရရင် ဒီလို တဖက်တစ်စဆွဲပြီး ပြောဆို ငြင်းခုံဆွေးနွေးရင်း
အကျိုးရှိတဲ့ အမြင်လေးတွေ မတူကွဲပြားတဲ့အမြင်လေးတွေ ဖလှယ်ခွင့်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် မနန်းတော်ရာသူရဲ့ ပိုစ့် ရော ကိုဖေါရင်း၇က်ဆီးဒင့်ရဲ့ပိုစ့်ရော
အင်မတန် အကျိုးရှိပါတယ် အကျိုးများပါတယ်ဗျာ…။
အတိတ်-ပစ္စုပ္ပန်-အနာဂါတ်ဆိုတာက.. လူတယောက်ရဲ့အခုဘ၀ထဲမှာပဲထားမယ်ဆိုရင်.. မှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်.. “Universal Truth” လို့.. ပြောလိုမိပါတယ်..။
ရုပ်၊နာမ်တွေက.. ဖြစ်-တည်-ပျက်(ဥပါဒ်-ဌီ-ဘင်) သုံးခုထဲရှိတာပါ..။ “တည်”နေရာကကြည့်ရင်..” ဖြစ်”ကအတိတ်ဖြစ်ပြီး.. “ပျက်”က.. အနာဂါတ်ဖြစ်ပါတယ်..။
မသေခင် ရှေ့ရှေးဘ၀. သေပြီးဖြစ်လာမယ့်.နောက်နောင်ဘ၀တွေကို.. ပို့မယ်..လွှဲချမယ်ဆိုရင်တော့.. ကိုယ့်အလုပ်(ကံ)ကို.. ကိုယ်တာဝန်မယူ.. တယောက်ထဲ.. ၃ယောက်ခွဲအပြန်အလှန်လွှဲချနေတဲ့.. တယောက်သုံးကိုယ်ခွဲတယ်လို့.. ပြောချင်မိပါကြောင်း……..
(မည်သူမဆို မိမိတို့ခံယူချက်ကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်) ဆိုလို့နော..
ကျနော် ငယ်ငယ်က စာဖတ်တတ်ကာစ တွေ့ရာ ဖတ်တုန်း
(အိမ်မှာက စာအုပ်စုံတယ်ဆိုပါတော့) အဲဒီ “ဘင်” ဆိုတဲ့
စကားလုံးကို နားမလည်ဘူး။ သူရေးထားတာက မစင် ဘင်ပုတ် ပေါ့ဗျာ။
အဲဒါနဲ့ အဖိုးကိုမေးတော့ ဘင် ဆိုတာ ချီး ပေါ့ကွာလို့ အဖြေရတယ်ဗျ။
နောက်တခါ ဥပါဒ်ဒဝေ ဘာညာနဲ့ ဂါထာတွေမှာတွေ့လို့မေးတော့
ဥပါဒ်= ဘေး၊ အန်ဒရယ် ဘာညာပေါ့နော်။ အဲဒီလိုသိထားပြီ စိတ်ထဲမှာ။
ဒါနဲ့ နောက်တော့ စာတွေဖတ်ရင်း သူကြီး ခုပြောတဲ့ (ဥပါဒ်-ဌီ-ဘင်) ကြီးကို
(တကယ်ကဒီမှာပါတဲ့ ဥပါဒ်နဲ့ ဟိုကဥပါဒ်၊ ဒီက ဘင်နဲ့ ဟိုက ဘင် က တခြားစီပါ။(^^)
…..စကားလုံးရဲ့အနက်ကိုအမှားသိနဲ့ရှိခဲ့ ပေမဲ့ တွေးတဲ့လမ်းကတည့်သွားတာများလား)
တော်ပြီ ထီ=ဌီ ဘဲ ကောင်းတယ် လို့ စိတ်ထဲ ဖြစ်မိတယ်။
နောက်တော့ ထီ=ဌီ =ပစ္စုပ္ပန် သာလျှင် ငါပိုင်တာဘဲ။
ဒါဆိုငါမှန်တယ် ဆိုပြီး ခုကောင်းအောင်လုပ်၊ခုကြိုးစား၊ခုလုပ် ဆိုပြီး ကိုယ်ဟာကို
“ခု လူ” ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြောရရင် ကိုယ်စွမ်းသလောက်တော့ ကိုယ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။~~~~~~~ဆိုတာမျိုးပါ။
သိတယ်… လာတော့မယ်ဆိုတာ… :harr:
မိုးပြာတို့.. မိုးဝါတို့.. ထပ်မလာကြေးနော…
“မြန်မာတွေ ၂ယောက်ရှိရင်.. ရန်ဖြစ်ကြတယ်”ဆိုကြတာကို..
“ငတို့မြန်မာဆိုတာ.. တယောက်ထဲတင် ၃ကိုယ်ခွဲပြီး.. ပဋိပက္ခဖြစ်နေတာ”လို့.. ရွဲ့ပြောရင်းကနေဖြစ်လာတဲ့.. ကိုယ်ပိုင်အမြင်ပါလို့..
ဘာခုမှ ကြောက်ပါပြီလဲ ..
မိုးပြာ မိုးဝါ မပြောတော့ပါဘူး …
မိုးခိုင် ၀ါဒီလို့ပါဘဲ …. :harr:
ပြောချင်တာတွေများနေလို့ စာတစ်တန် ပေတစ်ဖွဲ့နဲ့ အရှည်ကြီးပြောထားပါတယ်.. လမ်းကြုံရင် ၀င်ကြည့်ပါဦးလို့
သင်္ကြန်တရားစခန်းပွဲတုန်းက ဆရာတော်ကြီး ဟောလိုက်တဲ့ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်ကို နာခဲ့ရတယ်။
အခုချိန်မှာ (လက်ရှိအခြေအနေ၊ အသက်အရွယ်မှာ)
ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေထိုင်စားသောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ …..
အတိတ်ဆိုတာကို မမြင်ရတဲ့ ဟိုးးးးးးး ဘ၀အထိမစဉ်းစားပဲ….
ငယ်ငယ်က စာကောင်းကောင်းဖတ်ခဲ့လို့ ပညာတတ်ဖြစ်တယ်။
အဲလိုသာ စဉ်းစားလိုက်ရင် ……….
သဂျီးရဲ့ သုံးကိုယ်ခွဲတွေပါ အကျုံးဝင်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
3 in 1 သီအိုရီလေးပေ့ါ။ :harr:
အတိတ်၊ပစ္စူပ္ပန်၊အနာဂတ် အားလုံးကို ဒီဘ၀မှာတင်ပဲလို့.. တွေးပြီးဖြတ်နိုင်ကြရင်.. မြန်မာပြည်.. ၁၀နှစ်အတွင်း.. အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်သွားမယ်လို့.. အာမခံတယ်..။
.. ကွန်ဆာဗေးတစ်..ညာစွန်းဂိုဏ်းသား.. ရှေးစွန်းဆွဲတွေနဲ့..၀ါဒရေးရာ.. ပြဿနာတက်နေတာနဲ့တင်.. ၁၀နှစ်ကုန်မှာပါပဲ..
မှန်မှန်ကန်ကန် ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးမယုံကြည်တဲ့သူ ကံကိုမယုံကြည်တဲ့သူဟာ မိစ္ဆာဒိဌိ အယူရှိသူတွေလို့ မြတ်စွာဘုရားက အတိအလင်းဟောကြားထားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့မယုံကြည်တာလဲဆိုတော့ သိမြင်နိုင်ခဲတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့သိမြင်နိုင်ခဲလဲဆိုတော့ အ၀ိဇ္ဇာဖုံးနေလို့ပါပဲ။
တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာလည်း တခုတခုဖြစ်လာရင် အတိတ်ကံကြောင့်လို့ဆိုတဲ့သူတွေတော်တော်များပါတယ်။ အတိတ်ကံဆိုတာ ပြီးခဲ့တဲ့ဘ၀ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံလို့ ဆိုကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်ယခု လုပ်လိုက်တဲ့ ကံဟာလည်းနောက်စက္ကန့်မှာ အတိတ်ဖြစ်သွားပြီး အတိတ်ကံမည်ပါတယ်။ နောက် စက္ကန့်မှာ အတိတ်ဖြစ်သွားမဲ့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ လုပ်တဲ့ကံကို အကောင်းအဆိုး ဝေဖန်ပြီးလုပ်ကြမယ် ဆိုရင် ကောင်းသောကံတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ မေးကြည့်အုန်း ဘာလူမျိုးလဲဆိုတာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေး ကြီးပြင်းပြီး မနေ့တနေ့ကမှ ပြည်ပထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတာများ
မသိရင် wiki ထဲဝင်ကြည့် ဘာသာပြန်ပြီး ရွာမှာပို့စ်တင်နေတဲ့သူတွေကများ ဟာသဘဲ
အေး သိအောင်ပြောလိုက်မယ် မသိလို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူး
ဒီကြားထဲ အရူးလိုလို ကလေးအဖေလိုလိုကြပ်မပြည့်ကောင်ကလည်း ဘေးကနေ အရူးကိုလက်ခုပ်တီးပေးနေသေးတယ်
လူအထင်ကြီးတယ် ဘာတွေညာတွေလာပြမနေနဲ့ မောတယ်
စည်းကမ်းချက်အမှတ် ၁၃ နဲ့ငြိနေလို့ တရားဝင် အနုတ်ပေးတယ်ဗျား..
တော်ကြာပွင့်လင်းလွန်းလို့ သူများနိုင်ငံမှာ ရိုက်ခံနေရအုန်းမယ်
ကိုရှုံးနိမ့်မှုများနဲ့လူရေ ကျနော် အဲဒါကို ပို့စ်တခုရေးတင်ထားတယ်ဗျာ။
ဖြဲမကြီးရေ… သူများမြှောက်ပေးတိုင်း ဂွေးတက်အောင်ကမနေနဲ့ဦး
စကား စကားပြောပါများ၊ စကားထဲက ဇာတိပြဖြစ်နေမယ်
လူဆိုတာ စကားပြောရင် ကြည့်ပြောရတယ်
အသုဘ အိမ်သွားပြီးတော့ ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအကြောင်း ပြောလို့ မရဘူး
ထို့ အတူပဲ မင်္ဂလာ ရှိတဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နေရာမှာ လဲ အမင်္ဂလာ အကြောင်းတွေ လာပြောလို့ မရဘူး ဆိုတာ
ထမင်းစားတဲ့လူမှန်သမျှ သင်စရာမလိုပဲတတ်ထားရမယ့် အကြောင်းတွေပါပဲ
ကံဆိုတာ အလုပ်… ကုသိုလ်ကြောင့် အစေ့ပေါက်တယ်လို့ ပြောလို့ ရပေမယ့်…..
အခုပြောနေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ကုသိုလ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အစေ့ထက်….
အလုပ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ကံလို့ယုံကြည့်တဲ့သူပိုများတယ်လို့ ယေဘုယျနားလည်ပါတယ်……..
ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်ရမယ်ပေါ့နော်……. Present သမားတွေပေါ့….. တနည်းအားဖြင့်…..
မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူ ဆက်မဆွေးနွေးသင့်တော့ တဲ့ ပိုစ်တခုလို့ မြင်ကြောင်း……
ဒါမျိုးဆိုတာက အရင်က ပါလာပါတယ်လို့သက်သေလည်း ပြလို့ မရလို့ ပါ………
ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဖြစ်စေ ကုသိုလ်ဆိုတာ ဖြစ်စေ တိုင်းတာလို့ မရတဲ့အရာဖြစ်ကြောင်း…….
တနေ့တထောင်သာဝင်ပီး ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာကိုမြင်ဖူးသလို…..
တနေ့တသိန်းဝင်ရာကနေ ရှစ်သောင်းလောက်ပဲဝင်လို့အီးမှန်နေတဲ့မျက်နှာကိုလည်း မြင်ဖူးကြောင်း……
အားလုံးပြေးကြည့်မှ ၁၀၀ ရှိလို့၁၀၀ လှူလိုက်တဲ့ အလှူမျိုးလည်း မြင်ဖူးသလို……
အိပ်ကပ်ထဲမှာတင် နှစ်သိန်းလောက်ရှိတာကို ၁၀၀၀ လောက်လှူဖို့ တွန့် တိုနေတဲ့သူလည်း မြင်ဖူးကြောင်း……
ဆင်းရဲခြင်း ချမ်းသာခြင်း လှူဒန်းခြင်း မလှူဒန်းခြင်း ကံကောင်းခြင်း ကံဆိုးခြင်း စသဖြင့် ဖော်ပြလို့ မရတဲ့ နာမ်တွေဟာ ဘာသာရေးတခုအပေါ်မှာတင် မူမတည်သလို လူမျိုးရေး ပေါ်မှာလည်း မူမတည်ကြောင်း……
လူတဦးတယောက်ခြင်းစီရဲ့ လေ့လာမှူ ဆန်းစစ်မှူ ကြိုးစားအားထုတ်မှူမှာသာလျင် မူတည်ကြောင်း………
မန့် ခြင်းအမှူ လွန်တာရှိသော် အကျွန်တောင်းပန်ပါည်………
ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေ ဒီရွာထဲမှာ ငြင်းခုန်ခဲ့ကြပေါင်းလဲ များပါပြီ …
ဘယ်တော့မှ အဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ အငြင်းအခုံအနေနဲ့ပဲ အဖြေမထွက်ခဲ့ဘူး …
ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ကိုယ် မှန်တယ်ထင်တဲ့ဝါဒတစ်ခုကို စွဲထားကြတာချည်းပါပဲ …
ဆင်းရဲတာ ကံမကောင်းလို့လို့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ သာဓကတွေကို တွေ့နိုင်သလို …
ဆင်းရဲတာ အသုံးမကျလို့ဆိုတဲ့ သာဓကလဲ အများကြီးရှိလိမ့်မယ် ..
ချမ်းသာတာ ကံကောင်းလို့ .. ချမ်းသာတာ အလုပ်လုပ်လို့ .. စသဖြင့် မတူ မတူ တဲ့ဘ၀တွေမှာ မတူနိုင်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေ ရှိနေတာမို့လို့ ကိုယ်ကြည့်တဲ့ ရှုဒေါင့်တစ်ခုကနေဆိုရင် အမှန်တွေချည်းပဲ ဖြစ်မှာပါ ..
မတူညီသော အတွေးအခေါ်ရှိသူအားလုံးကို လေးစားအထင်ကြီးတဲ့အကြောင်း ၀င်ပြောရင်း ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကို အားပေးလိုက်ပါတယ် …
ငယ်ငယ်တုံးက တင်အောင်နီကာတွန်းလေးတစ်ခုဖတ်ဖူးတယ် …..
ဘေးအိမ်ကြီးကဟီးလို့ပေါ့ ချမ်းသာလိုက်တာ.. အဲဒီမှာ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ စတိုင်အပြည့်ကျောင်းသွားတော့မဲ့ မူလတန်းကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်….
တစ်ဘက်မှာတော့ ဆင်းရဲသားသားအဖနှစ်ယောက် တောင်းရက်နေတာလား (ဘာလုပ်နေတာလဲ သိပ်တော့မမှတ်မိ) စုတ်စုတ်ပြတ် ပြတ်ပေပေတူးတူးနဲ့ သားအဖတွေ အလုပ်လုပ်နေတာ… အဲဒီမှာ မူလတန်းအရွယ် ကျောင်းမနေနိုင်တဲ့ ကလေးက သူ့အဖေကို မေးတယ် “အဖေရယ် သူတို့က ဘာလို့ အရမ်းချမ်းသာတာလဲ ” အဖေက ပြန်ဖြေတယ် “သားရယ် သူ့အဖေက ဆရာဝန်ကြီးလေ အဲဒီတော့ ချမ်းသာတာပေါ့” တဲ့ အဲဒီမှာ ကလေးကပြန်ပြောတယ် “အဖေရာ အဖေ တော်တော်ညံ့တာပဲ၊ သူ့လို ဆရာဝန်ကြီးလုပ်ပါလား၊ ဒါဆို သားတို့ချမ်းသာမှာပေါ့…. အဖေဘာလို့ဆရာဝန်မလုပ်တာလဲ”……
ရုံးတစ်ရုံးမှာ ပြသနာတစ်ခုခုပေါ်လာခဲ့ရင်၊ မန်နေဂျာ… အရာရှိပေါ့လေ လူအမျိူးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ပြသနာရှင်းနည်းကွာပါတယ်….
မန်နေဂျာ အေ… (တာဝန်မခံသူ)
– မင်းတို့ ငါ့ကို အစကတည်းက ဘာလို့မပြောတာလဲ။ ဒီကစ္စ ငါလုံးဝမသိရပါလား၊ အပြစ်ဖြစ်မှ ငါ့ခေါင်းလာမပုံနဲ့လေ… လျှော်မလား ထွက်မလားကြိုက်တာရွေး….
မန်နေဂျာ ဘီ… (သူတစ်ပါးအပြစ် ပုံချသူ)
– အဲဒီ့ကိစ္စက ဟိုကောင်မဟုတ်လား ငါသိတယ်၊ သူ့ အပြစ်ကြီးပဲ။ ငါ အထက်ကို ရီပို့တင်လိုက်မယ်.. ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ကောင်းကောင်းစဉ်းစားထား။
မန်နေဂျာ စီ… (ပြသနာရှင်းပေးသူ)
– ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်တော့ ဒီကိစ္စက အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်။ အဆုံးအရှုံးလဲနဲမယ်… မောင်ကကြီး မင်းဒါလုပ်၊ မောင်ခခွေးမင်းက ဒီသွား၊ ငါက ဒါလုပ်မယ်။ အားလုံးအတွက် ဒါဟာ သင်ခန်းစာပဲ၊ နောက်မဖြစ်အောင်လုပ်။ ပြီးမှ ငါအပြစ်ရှိသူကို ထိုက်သင့်သလို အရေးယူမယ်။
ဆိုတော့ကာ…. မန်နေဂျာ အေ နဲ့ မန်နေဂျာ ဘီကို ၊ အထက်က ကာတွန်းထဲက “အဖေ ဆရာဝန်ကြီးလုပ်ပါလား” ဆိုတဲ့ အဆင့်လောက်ပဲ ရှိတဲ့သူတွေလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ကိုယ်က လူတွေကိုကူညီချင်၊ လူမှုရေးလုပ်ချင်ရင်၊ လူတွေကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်…
အပြစ်တင်ခြင်းက ပြသနာကိုဘယ်လိုမှ မဖြေရှင်းပေးပါဘူး… အထူးသဖြင့် သူတစ်ပါး အားနည်းချက်ကို ထောက်ပြတာ မရင့်ကျက်သေးသူတွေရဲ့ အလုပ်ပါ။ အားနဲချက်မရှိတဲ့လူ ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ ဥပမာ ဘီလ်ဂိတ်က မင်းကွာ ဒီလောက်ဦးနှောက်နဲရလား အဲဒါကြောင့် ငါ့လို မဖြစ်တာ မင်းဒီဘ၀ကမတက်တာ… လာပြောရင် ခံနိုင်မလား… ဒါက ရွေဖော့ရိုးလေးနဲ့ သာသာလေး ရိုက်ပြတာပါ….
ဗိုလ်ချုပ်က “ခင်ဗျားတို့ဖာနိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်” ပြောတာ… ပြောလို့ရပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် ယူနီဖောင်းနှစ်စုံနဲ့ အသက်ပေးတဲ့ အထိ တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်ပြသွားတာ။ ကြက်ချေးတန်းက အလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်းကို တက်ပြိုင်လို့မရသလိုပေါ့….
တော်ပါပြီ ဆက်ပြောရင် နိုင်ငံရေးတွေပါကုန်မယ်… ဟီး ဟီး သိသလောက် တတ်သလောက် ပြောလို့လဲ ကုန်လုပါးနီးနီး :harr:
စဂါးမစပ် Like လုပ်သွားပါဂျောင်း
မနန်းတော်ရာသူရေ အစ်မ Post ကိုအရင်မဖတ်ပဲ ကိုရင်ရှုံးကို Post ကို အရင်ဖတ်မိလို့
အခုပဲ အဲဒီ ကံမရှိဥာဏ်ရှိတိုင်းမွဲကို မန့်ခဲ့ရပြီးပြီ ဆင်းရဲပြီးအပျင်းထူအချောင်လိုက်
အစ်မရဲ့အဆိုကိုထောက်ခံတယ်ဗျာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ အဲဒီထဲက
တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လိုပါပဲ သူများထက်ပင်ပန်းကြိုးစားခဲ့ရတယ် ကြိုးစားမှုရလဒ်ကျလဲ သူများထက်နောက်ကောက်ကျပြီးမှ ရခဲ့တယ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲအစ်ပြောသလို
တွေအများကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ် ကြားဖူးတာလေးပြောပြမယ် သစ်ပင်တစ်ပင်ကမျိုးစေ့
တော့မှန်တယ် ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ရေလောင်းပေါင်းသင် အခုခေတ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်
ဓါတ်မြေသြဇာပိုးသတ်ဆေးပေါ့ အဲဒါတွေမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဆို ဖြစ်ထွန်းသင့်သလောက်
မဖြစ်ထွန်းနိုင်ဘူးတဲ့ဗျာ ကြားဖူးခဲ့တာ ….
အတိတ်ရဲ့ကန်ချက်ကြောင့်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဟောဒီပစ္စုပ္ပန်ထဲကို
ဘုန်းကနဲ ကိုရို့ ကားယား လေးဖက်မှောက် ကျနော် ပြုတ်ကျလာခဲ့ တယ်။
အရသာကတော့ခါးသက်သက်၊ စပ်ဖျင်းဖျင်း၊ အောင့် သက်သက်….
ကပျာကယာ လူးလဲကုန်းထ ဘေးဘီဝဲယာ ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတဲ့ နေရာကိုလေ့ လာကြည့် မိတော့ 
ဒါ…ဒါ.. ငါနေရမယ့် နေရာမယ့် နေရာမဟုတ်ဘူး..
ကဲ ကဲ ခရီးဆက်လိုက်အုံးမယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လို့ ထင်ရတဲ့အတိတ်ရေ…. တာ့ တာနော်
အမှန်ဆုံးပဲကျွန်မလိုချင်တာအဲဒါ။။။။ အဘဖောက အနာဂတ်ကို ပစ္စုန်ပ္ပန်မှတ်နေလို့ကျွန်မရှင်းရတာ အာပေါက်နေပါပေါ့ရှင်။
မနန်းတော်ရာသူရေ အချို့က အသစ်ဆိုရင် ဦးကျိုးအောင် နှိမ်ချင်တဲ့ သဘောရှိတယ်ဆိုတာ ပြောထားချင်တယ်ဗျာ။ အမှန်တော့ ရသစာက အတည်လုပ်ပြီး ဆွေးနွေးလို့ မကောင်းပါဘူး။ ယေဘူယျလောက်ပဲ ရပါတယ်။ သူက စီမံကိန်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် အဲဒီအကြောင်းကို ပြောခဲ့ပြီးပြီ။
ဆင်းရဲ ခြင်း ချမ်းသာခြင်းဟာ…
ဒါန ကုသိုလ်နဲ့ ဆိုင်တယ်..လို့ပြောတာကိုတော့…
My British colleague once told me that he could not understand why mother Treazer was helping poor in India. There are many Billionaires in India, even the richest one in UK is an Indian who are not showing concern of poor in their own country.
I think it depends how you accept yourself.
ဒီကော်မန့်လေးက.. ကျုပ်ကို.. တွေးစရာတွေ.. အဖြေတွေအများကြီးဖွင့်ပြလိုက်သလိုပါ..။
ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးတွေ.. ခရစ်ယန်၊ အစ္စလမ်၊ ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာတွေနဲ့.. သူတို့ရဲ့… ဘာသာဝင်တွေ.. လုပ်ကိုင်လှူတန်းပုံတွေ.. နှိုင်းယှဉ်ကြည့်..တွေ့မိစရာဖြစ်သွားတယ်..
မြန်မာပြည်က.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်..မီလီယံနာတွေ.. ဘယ်ကိုလှူနေကြသလည်း..
ဂျပန်က.. ဇမ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ.. ဘယ်လိုလုပ်ကြသလည်း..
မြန်မာပြည်က.. ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟာ.. ဟိန္ဒူနွယ်လွန်းနေမှန်း အရမ်းသိသာသွားတာပဲ..
တို့ရွာ၊ တို့မြေ၊ တို့ရွာမြေ၀ယ်
ပုထိုး မြင့်မောင်း၊ ကျောင်းကြိုကျောင်းကြား
သူကြီးရေ နွယ်လွန်းနေတာမဟုတ်ဘူး ရောကိုရောကုန်တာကိုပြောချင်တာ။
တချို့ ကဟိန္ဒူဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲလို့တောင်ပြောကြတယ် ပြောချင်တာကအဲဒါလေးပါ..။
ဒီမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမီးတောင်နင်းကြတယ်သူကြီးရေ ကောင်းရော..။
စိုင်း ကွမ်းခေးဆိုလား စိုင်း ကွမ်ဂွေးဆိုလား မသိတဲ့ကောင်ကြီးရေ
သများနိုင်ငံမှာ ကြက်ဖင်ဆီဖူးရောင်းပြီး အေးရာအေးကြောင်းနေပါကွာ
မင်းတို့လို့ သူများဂွေးပေါ်တာကို လိုက်ကြည့်ကြီး အူမမြူးတတ်ပါဘူး
သူတပါးကို နားလည်အောင် ရှင်းပြ ငြင်းဆိုနေမည့်အလုပ်ထက်
မိမိကိုယ်ကို နားလည်အောင် ကြိုးစားနေခြင်းက ပို၍ အကျိုးကြီးပေသည် ။
အဓိကကတော့ ဘယ်သူမပြုမိမိမှု မိမိ၏ အရေးအသား အပြောအဆို အမူအယာ သို့တည်းမဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် အများသူငါ ချစ်ခင်နှစ် သက်မြတ်နိုးတတ်ကြသလို စောက်မြင်လည်းကပ်တတ်ကြတယ် ဒါက လောကသဘာဝပဲ ညွှတ်ညွှတ်ညွှတ်